Sunaulo Nepal | प्रेम पत्र -‘भ्यालेन्टाइन डे बिशेष’ प्रेम पत्र -‘भ्यालेन्टाइन डे बिशेष’ – Sunaulo Nepal
प्रेम पत्र -‘भ्यालेन्टाइन डे बिशेष’
प्रिय अन्जू, धेरै माया ।
प्रेम कुनै धर्म, जातजाति र भुगोलसँग जोडिनु हुदैन र जोडिदैन पनि । त्यसैले होला मैले तिमिलाई माया गरिरहेको छु ।तिमिलाई त थाह छैन होला, तिम्रो सम्झनाको बाछिट्टाले मेरो हृदय भिजिरहेको हुन्छ आजभोलि । म भौगोलिक रुपमा टाढा भए पनि तिम्रो समिपमै छु झैं लागिरहन्छ । म जहाँ गए पनि मेरो यात्राको सहारा र सहयात्री तिम्रो याद नै बनिरहेको हुन्छ आजभोलि । मानसपटलमा आइरहने धेरै कुराहरु मध्ये तिम्रो याद भने निकै प्रष्ट भएर आइरहेको हुन्छ ।
तिमिलाई माया गर्छु भनेर तिमी सँग भन्न धेरै पटक तिम्रो नजिक नगएको पनि होइन तर भन्न सकिरहेको थिइन । यो हिम्मत् भन्ने चिज चाहिदा कहिल्यै मेरो साथ रहेन र भन्न सकिन । कहिले त लाग्छ मैले तिमिलाई माया गर्ने पुर्बाधारहरु पूरा नभएर पनि भन्न हिम्मत् न आएको हो कि ?
प्रिय अन्जू, जस्लाई माया गरिन्छ , उसैलाई सम्झनु त हर कसैको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसैले पनि मैले तिमिलाई सम्झिरहनुमा प्रष्ट कारण छ – म तिमिलाई माया गर्छु । हरेक साँझ पर क्षितिजमा सुन्तला रंङको अबशेष छोडेर घाम अस्ताउछ तर मेरो मन भने झन् गुलाबी भएर तिमिलाई सम्झिरहन्छ । दिनलाई त रातको छाँयाले अँध्यारो हुन्छ तर तिमिलाई माया गर्ने मेरो मन कहिल्यै अँध्यारो भएन तर पनि मैले तिमिलाई माया गर्छु भनेर भन्न सकिन ।
बिभिन्न परिस्थितिहरुको दोभानमा धेरै पटक बगिरहें तर तिमिलाई माया गर्छु भन्नै सकिरहेको थिइन तर आज भ्यालेन्टाइन डे (प्रणय दिवस) र सम्झें फलामलाई आकार दिने हो भने तातैमा पिट्नुपर्छ अनि मात्र सहि आकार दिन सकिन्छ त्यसैले भ्यालेन्टाइन डेको अवसर पारेर तिमिलाई प्रेम प्रस्ताब राख्दैछु ।धेरैले आजको दिन प्रेम प्रस्ताब राख्दा अस्वीकार हुदैन भन्ने बिश्वास बोकेका हुन्छन् र मलाई पनि त्यस्तै बिश्वास छ ।
भ्यालेन्टाइन डे किन मनाइन्छ थाह छ तिमिलाई? आजकै दिन प्रेम प्रस्ताब राख्नुको कारण र महत्व थाह छ तिमिलाई ? सुन अन्जू, ई.स २७० तिर रोममा क्लाउडियस द्दितिय नाम गरेका सम्राटले शासन चलाउथे । उनको सोचाइमा शैनिक हरुले प्रेम र बिबाह गर्दा गोप्य सुचनाहरु बाहिरिन सक्ने हुनाले , सैनिकहरुलाई प्रेम र बिबाह गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाएका थिए , बर्जित गरेका थिए । तर पादरी सन्त भ्यालेन्टाइनलाई भने सैनिकहरुलाई शारीरिक सम्बेगबिहिन बनाएर राख्ने कुरा पटक्कै चित्त बुझेन र उनले धेरैलाई प्रेम गर्न र बिबाह गर्न उत्प्रेरित गरिरह्यो भने कति त सामुहिक बिवाह समेत गरिदिएका थिए ।
यहि निषेधाज्ञा तोडेका कारण त्यहाका शासक क्लाउडियसले भ्यालेन्टाइनलाई जेलमा हाले र पछि मृत्युदण्ड दिएका थिए, ई.स. २७० फेब्रुअरी १४ का दिन । उसैको सम्झनाना भ्यालेन्टाइन डे मनाईएको हो ।
प्रिय् अन्जू । हुन त भ्यालेन्टाइन डे कुनैधर्म ग्रन्थमा उल्लेख छैन । यो त मानिसको प्रेम गर्ने नैसर्गिक अधिकारको पर्व हो ।त्यसैले त यस्को फैलावट विश्वब्यापी हुन सजिलो भएको छ । पश्चिमी संस्कृति हो भन्दा भन्दै पनि भ्यालेन्टाइन डे ले युवाहरु माझ मान्यता पाएकै छ ।यस्को जतिसुकै बिरोध गरियता पनि यस्को लोकप्रियता झन्झन् बढिरहेको छ ।
प्रेमको दियो निभ्न नदिने महान सहिदको सम्झनामा र आफ्नो प्रेमको दीयो बालिरहन र प्रेमलाई अझ प्रगाढ बनाउन भ्यालेन्टाइन डे मनाइन्छ । मन सँग मनको रंङ मिले पछि नै माया बस्ने हो । धेरै पहिला देखिनै रङहरु मिलेको मनहरु आधिकारिक रुपमा बाहिर एक-आपसमा प्रकट गर्ने दिनको रुपमा यो भ्यालेन्टाइन डे लाई लिईन्छ ।
सुन अन्जू, हुन त हरेक कुराहरुको सकारात्मक र नकारात्मक पाटाहरु हुन्छन् । कसै कसैले भ्यालेन्टाइन डे को नाममा खर्च धेरै गर्ने गरेका पनि छन् तर हामीले बुझ्नु जरुरी छ, महँगो उपहार र प्रेम दर्शाउने बिदेशी कार्डहरुले मात्र सच्चा माया बस्ने होर ? माया त उपहार भन्दा पनि मन र मन मिलेर बस्ने कुरा न हो । मन र मनको रँङ मिलेर बन्ने कुरा न हो ।त्यसैलेे पनि हामीले बुझ्नुपर्छ , प्रेम दिवस मनाउदै गर्दा हाम्रो हाम्रो संस्कृति र परम्पराको ख्याल गर्नै पर्छ । हाम्रो परम्परा र संस्कृतिको सीमा नाघ्नु हुदैन । मलाई लाग्छ तिमी पनि यो मामलामा निकै सजक छ्यौ ।
त्यसो त भ्यालेन्टाइनको प्रेम प्रतिको कदर गर्दै विश्वप्रसिद्द साहित्यकारहरु सेक्सपियर , सिग्मण्ड फ्राइड लगायत धेरैले आफ्नो प्रसिद्ध कृतिहरुमा भ्यालेन्टाइनको नाम उल्लेख गरेर उनी प्रतिको सम्मान गरेको पाइन्छ ।
हुन त भ्यालेन्टाइनलाई जेलमा राखेको बेलामा जेलरकी छोरीलाई खुब प्रेम गरेको कुरा पनि उल्लेख छ ।भ्या्ले्न्टाइनलाई मृत्युदण्ड दिनु अघि उनले ती युवतीलाई प्रेम पत्र लेखेका थिए । पत्रमा के लेखेका थिए भन्ने उल्लेख नगरे पनि बाहिर खाम मा भने उही तिम्रो भ्यालेन्टाइन लेखेका थिए र त्यस लगत्तै उस्लाई मृत्युदण्ड दिएको उल्लेख छ । यहि कारणले पनि आजको दिन धेरैले प्रेम पत्र लेखेर दिने गरेका छन् । ठिक यसै दिन मैले पनि प्रेम पत्र लेखेर तिमिलाई प्रेम प्रस्ताब राख्दैछु । मलाई बिश्वास छ तिमिले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनेछौ ।
प्रिय अन्जू, जसरी शरीरलाई भोजनको आवश्यकता हुन्छ नि, त्यसरीनै हृदयलाई प्रेमको प्यास हुन्छ रे ।जो प्रेमको अभाबमा जिउन बाध्य छन् , उनिहरुको शरीर जस्तोसुकै देखिए पनि आत्मा भोकै हुन्छ र अन्तर्मनले शतत् प्रेम मागिरहेकै हुन्छ । तिमिलाई थाह पनि होला प्रेम बिनाको जीवन कुनै न कुनै अर्थमा असन्तुलित हुन्छ । प्रेमले जीवनमा सन्तुलन, सन्तोष र परितृप्ती ल्याउछ रे। त्यसैले पनि मैले तिमिलाई माया गरिरहेको छु, हिमाली जडिबुटी जस्तै अर्गानिक माया ।
तिमिलाई एउटा कुरा भनिहाल्छु , माया त जीवनको ईन्द्रधनुष जस्तै हुनुपर्छ जहाँ जिवनको सम्पुर्ण रंङहरु समाहित हुन सकोस् , हो अन्जु मैले तिमिलाई त्यस्तै माया गरेको छु । यस्तो लाग्दैछ आजभोलि त यो मौसम तिम्रो र मेरो लागि मात्र हो ।तिमिलाई माया गरेदेखि मलाई दिन मात्र होइन रात पनि निकै सुन्दर लाग्छ । कहिले तिम्रो सपना देख्न पाइन्छ अहिले सुन्दर जून र ताराहरु फुलाइदिने आकासको बगैँचा हेरि हेरि तिमिलाई सम्झेर बसिरहन मन लाग्छ ।
अन्तमा प्रिय अन्जू । आउ हामी माया गरौं प्रेम गरौं , बिकृतिलाई हटाएर अपार उल्लास र उत्साहका साथ भ्यालेन्टाइन डे मनाऔं र प्रेमको सम्मान गरौं । “ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे ।”
उहीँ तिम्रो नबराज क्षितिज ।
२ फाल्गुन २०७३, सोमबार ०९:२० मा प्रकाशित